SG, Author at BigulNews
एजेन्सी, मिस यूनि‍भर्स प्रतियोगितामा मिस इराक सारा इदानलाई मिस इजरायल अदार गेंडल्‍समैनसँग सेल्फी लिनु महँगो परेको छ । यस सेल्फी पश्चात उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीहरु आउन थालेको छ । अनेक धम्कीहरु परिवारमाथि एकपछि अर्को गरेर आउन थालेपछि मिस इराकको परिवारले आफ्नो देश छोडेर गएका छन् । यस वर्ष १४ नवेम्बर कमिस यूनिभर्स-२०१७ प्रतियोगि‍ताको समयमा मिस […]
यी ५ राशि भएका केटाहरुलाई २०१८ मा मिल्ने छ सच्चा प्रेमिका!
नयाँ वर्ष सुरु हुनै लाग्दा मानिसहरु नयाँ-नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने र नयाँ मान्छेसंग भेट्ने गरिरहेका छन्। यस उत्साहमा कोही मान्छेले सबै पुराना दुखहरु भुलेर अगाडी बढ्छन् भने कोही पुरानै सम्बन्धलाई एक मौका दिरहेका हुन्छन्। यिनै अवसरहरुका बीच यस लेखमा जान्नुहोस् जुन राशि अनुसार यो वर्ष तपाईका लागि सम्बन्धहरुलाई लिएर कस्तो रहनेछ। मेष राशी: मेष राशिका मानिसहरुका लागी २०१८ मा माया प्रेमको दृष्टिले धेरै राम्रो हुनेछ। यी मान्छे […]
स्मार्टफोन र अन्य ग्याजेटहरूको बढ्दो प्रयोगले टीनएजर्समा मानसिक स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित जोखिमको खतरा बढाउँछ। यसले ध्यान, व्यवहार र आत्म विश्वासमा असर पार्छ। विशेषज्ञहरु के भन्छन् ? संयुक्त राज्य अमरीकाको उत्तरी केरोलिनामा डरहमको ड्यूक विश्वविद्यालयको यस शोधका प्रमुख लेखक मेडिलेन जर्जले बताए कि टिनएजर्समा थप प्रविधिहरू धेरै प्रयोग गर्दा तिनीहरूको व्यवहारमा समस्या ल्याउँछ र उनीहरूले कुनै पनि कुरामा ध्यान दिन सक्दैनन्। यसको साथै, हाइपरएक्टिविटी डिस्र्अडरको लक्षण […]
एजेन्सी, केहि युवतीहरु अर्थात् महिलाहरु कुनै पुरुषले नराम्रो दृष्टिकोणले जिस्किने, अश्लिल शब्द बोल्ने गर्यो भने चुपचाप सहेर बस्ने गर्छन भने केहि युवतीहरुले त्यसको प्रतिकार गर्ने गर्छन। त्यस्तै हालै ब्राजिलकी एक युवतीले पनि आफुलाई नराम्रो दृष्टिकोणले जिस्किने एक युवकलाई प्रतिकार गरेकी छिन्। उनले ति युवकलाई चिच्याउँदै सडकको बिचमा राखेर पिटेकी छिन्। त्यतिले मात्र उनको रिस कम भएन उनले ति युवकलाई आफ्नो खुट्टाले […]